N'ụzọ zuru ezu akpaka otu-apụ onye-apụ servo moto nkpuchi igwe factory
A na-agbakọta igwe niile site na ihe eji eme ihe, ịmalite, ịgbado ọkụ, ịgbado ọkụ na akụkụ ndị ọzọ. Igwe akụrụngwa nwere ike mepụta ihe mkpuchi ihu nwere ike iwepụ, mana ọ bụghị N95 na masks stereo. Ma nkpuchi ahụ bụ ahụike ma ọ bụ na ọ nweghị ihe jikọrọ ya na igwe. Ọ bụrụhaala na nkpuchi ahụ nwere ọgwụ mgbochi, a ga-eji ihe nkpuchi ahụ mepụtara maka akụrụngwa ịwa ahụ.
Dịka ihe ndị ahịa chọrọ si dị, igwe igwe akụrụngwa akpaka azụpụtara nke ọma ka emepụtara nke ọma na China ma zụta ya n'ahịa mba ọzọ, igwe ahụ na-akpaghị aka. Enwere ike iji ya mee ihe, kpaa, pịchaa ma belata ihe nkpuchi ahụ n'otu oge, usoro nrụpụta pụrụ iche na-eme ka usoro doro anya doo anya yana anaghị agbanwe na mmepụta, nke nwere ike belata oke ihe mkpofu ma hụ na arụmọrụ nke ihe nkpuchi mepụtara
Duck ọnụ nkpuchi igwe
Duckbill nkpuchi igwe bụ igwe nke na-eji ultrasonic enweghị ntụpọ ịgbado ọkụ ụkpụrụ na-emepụta duckbill ekara nkpuchi nke kwesịrị ekwesị n'ihi na elu mmetọ ụlọ ọrụ. Ọ nwere nnukwu ogo nke akpaaka. Ọ nwere otu akara site na nri ruo na ngwaahịa. Ọ nwere akpaka nri nke akụrụngwa, onwe ha imi doo akara erute usoro, na ike kechie imi akara n'ime ndị na-abụghị kpara akwa na-akpaghị aka, n'ogige atụrụ na-akpaghị aka na bee okokụre ngwaahịa, The ngwaahịa emepụta site ọbọgwụ onu okuko nkpuchi igwe nwere mara mma anya, mụ arụmọrụ, akwa mkpụrụ, obere ntụpọ ọnụego na ọrụ dị mfe.
Butterfly nkpuchi igwe
Automatic urukurubụba katuunu nkpuchi igwe bụ ọhụrụ ụdị ngwá mepụtara izute mkpa nke ndị ahịa; 2 ~ 6 n'ígwé nke eyi spunbonded nonwovens, ọrụ carbon na filtration ihe na-eji dị ka nri ihe (dị ka nzacha mmetụta nke ngwaọrụ, N95, FFP2 na ndị ọzọ na ụkpụrụ nwere ike nweta)
Na-agbanwe ntị gbalaga ike akpụ ụgbọelu nkpuchi igwe ụgbọelu disposable agbanwe ntị gbalaga nkpuchi machining
Na-agbanwe ụgbọelu igwe adabara akpaka mmepụta nke ụgbọelu nkpuchi The mmepụta akara nke na-agbanwe ntị eriri ụgbọelu nkpuchi igwe na-bụ-eji maka akpaka mmepụta nke ụgbọelu nkpuchi. Ọ tumadi agụnye dum mpịakọta nke ákwà mgbe unwinding, onu wrapping, imi mmanya ngwa, mpịachi, ntị belt ọnwụ na njọ, na okokụre ngwaahịa ọnwụ. Igwe a rụchara arụpụtara site na ikpo okwu ebu. A na-eji akwa ahụ na-agbanwe dị ka akụrụngwa maka bandị ntị, nke emere onwe ya ma jikọta ya na ahụ, ka mma mma nke nkpuchi ahụ. Ejiri ya na ebili mmiri ultrasonic, ọ nwere ike iji ebili mmiri ozugbo gbanye, ịkpụ ma ọ bụ ihe akara ngwa ngwa, njikwa PLC, arụmọrụ kwụsiri ike, ọrụ dị mfe na ịchekwa ọrụ, arụmọrụ dị elu.
Cup ụdị, cup ụdị ọkara akpaka nkpuchi igwe, ọkara akpaka cup ụdị nkpuchi igwe
Hot pịa akpụ - iko ụdị nkpuchi na-ekpo ọkụ pịa akpụ igwe, nke na-eji ụkpụrụ nke na-ekpo ọkụ ịpị mezue iko ekara nkpuchi akpụ. Enwere ọnọdụ ọrụ isii dị n'otu igwe, mmadụ abụọ na-arụkwa ọrụ n'otu oge.
Automatic elu ọsọ ọsọ imi ebi akwụkwọ mpịachi nkpuchi igwe
The akpaka kn95 / N95 nkpuchi mmepụta akara na-akpan mere maka elu mmetọ ụlọ ọrụ na ọgwụ na ahụ ike na ụlọ ọrụ. Adabara okenye, ụmụaka nkpuchi na respirator na-eku ume valvụ. Akụrụngwa a na-eji njikwa mmemme servo mezue mmepụta akpaka, site na akụrụngwa (3 ~ 6 n'ígwé) iji rụchaa ngwaahịa, arụmọrụ akpaka; echiche a haziri na teknụzụ tozuru oke, nwere ike mepụta ihe mkpuchi dị iche iche; okokụre ngwaahịa nwere elu arụmọrụ, ezi mpịachi, mara mma ntị gbalaga ịgbado ọkụ, ike erughị ala, akpaka burial imi mmanya na akpaka ebi akwụkwọ ọrụ; akụrụngwa bụ njikwa na-akpaghị aka, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-emepụta mmepụta Stable.
Threadened aluminum foil akpa ntụpọ aluminum foil agụụ akpa nwere ike ahaziri nri nkwakọ bag tii nkwakọ akpa ọcha aluminum foil akpa
Clo65d ọcha aluminom ihe nkiri bụ multilayer akwa mgbochi na mgbapu na-eguzogide ọgwụ ihe mepụtara site neume. The ngwaahịa nwere ndị na-esonụ e ji mara: ọla ọcha na-acha ọcha anya, opaque, reflective, ike n'ibu Njirimara, elu mgbochi ọgbụgba ọkụ arụmọrụ, mgbochi mgbapu adọka arụmọrụ, mgbochi static, wdg
Naịlọn agụụ akpa ntụpọ uzo uzo osikapa nri plastic bag ọhụrụ edebe plastic nkwakọ akpa nwere ike ahaziri
Fh001 naịlọn agụụ akpa film bụ ụdị ọtụtụ ihe mejupụtara nke a bonded site biaxial tensile BOPA film na CPE film site akọrọ mejupụtara usoro. Ọ bụ ihe a na-ejikarị eme ihe na China. Ngwaahịa a nwere mgbochi static ọrụ, ezi esi kpọpụ mmadụ nile, elu nghọta, ala oxygen permeability, ezi mmiri-àmà arụmọrụ, elu ike ọdụdọ na mgbapu eguzogide, mfe okpomọkụ akara, ezi akara na ịka nká na-eguzogide.
Packaging Afọ akpa, Uhie Uhie Uhie, Anti Static Afọ Cloth, Nkpuchi Manufacturer, Igwe nkpuchi ihu, Otu Dọrọ Otu Nkpuchi Igwe,